आजीवन सजायले अपराधीको मनोबल गिर्ला त ? «
आजीवन सजायले अपराधीको मनोबल गिर्ला त ?
प्रकाशित मिति : १० भाद्र २०७५, आईतवार १३:००
नेपालमा आजभोली दिनहुँ जस्तै बलात्कारपछि हत्या भइरहेका छन् । समाज चिन्ताग्रस्त छ । सरकारले यस्तै अपराधबाट सिर्जित समस्याको समाधानमै केन्द्रित भइरहनु परेको छ । कन्चनपुरमा निर्मला पन्त प्रकरणपछि पनि जताततै बलात्कारका घट्नाहरु घटिरहेका छन् । राजधानीमै केही दिनअघि गोदावरीमा एक १३ वर्षिया बालिकाको बलात्कार हुनु र लगत्तै फेरि नेपालटारमा पनि १४ वर्षिया बलात्कारको शिकार हुनुले अपराध झन् मौलाएको आभाष हुन्छ । यसले अपराधीको मनोबल झनै बढीरहेको संकेत गर्दछ ।
दिनदहाडै बलात्कार र हत्याको श्रृंखला दोहोरिएपछि त्यस्ता अपराधीले कस्ता सजाय पाउँछन् भन्ने सार्वजनिक चासो देखिन्छ । पूरानो ऐनले २० वर्ष सजाय तोकेपनि भदौ १ देखि जारी नयाँ संहिताले जबर्जस्ती करणी गरी हत्या गर्नेलाई बाँचुन्जेल कैद सजाय गने उल्लेख गरेको छ । यसबाहेक निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेमा, अपहरण गरी शरीर बन्धक लिइ ज्यान मारेमा, सावजनिक रुपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेमा, कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायको अस्त्त्वि नै लोप गर्ने जातिहत्या गरेमा बाँचुन्जेल कैद गरिने संहिताको दफा ४१ मा उल्लेख छ । भनिएको छ–‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुनै कसुर गर्ने कसुरदातालाई जन्मकैदको सजाय गर्दा त्यस्तो कसुरदार जीवित रहेसम्म कैद गर्नुपर्नेछ ।’
अब संहिता लागु भएको मितिले भदौ १ गतेदेखि जघन्य अपराधीले जन्मकैद सजायको भागीदार हुनुपर्ने देखिन्छ । तर यस्तो ऐन लागु भएपछि पनि अपराध घट्नुको साटो बढीरहेका छन् । र, आजीवन सजायले अपराधीको मनोबल गिर्ला त भन्ने सवैमा प्रश्न उब्जिएको छ । हुन त अपराधीले नियमको पाना पल्टाएर अपराध गर्दैन । उसलाई नियमको वास्ता पनि हुँदैन । जुनै बेला जे पनि गर्न सक्छ । संहिताको आजिवन सजायले अपराधी मनहरुमा सकारात्मक असर गर्नुको विकल्प छैन । यसमा राज्यले त्यस्तै भूमिकामा आफुलाई उभ्याउन आवश्यक छ ।